Fitaovana manatsara ny famokarana ho an'ny mpamorona | Famoronana an-tserasera
Betsaka ny fanentanana manakana antsika ny dingana ataontsika rehefa miresaka famolavolana, fa sarotra ny mifantoka. Koa satria ny fakam-panahy tsy misy farany hatramin'ny fanemorana ka hatramin'ny asa marobe amin'ny tetikasa samihafa izay mampiodina antsika. Ireo fanelingelenana ireo dia manakana ny asantsika sy ny fifantohantsika. Noho io antony io dia matetika isika no manao asa tsy ampy amintsika. ary mahasosotra antsika.
Samy manana ny fanelingelenany isika rehetra, na mailaka tsy tapaka sy fanairana amin'ny haino aman-jery sosialy izany na tsy fisian'ny antony manosika fotsiny. Mmaro amin'ireo fitaovana fitantanana lehibe no mampiditra asa hanatsarana ny vokatraSaingy tsy misy vahaolana tokana.
Indraindray isika dia mila zavatra manokana ho an'ny olantsika. Vakio ireto fitaovana manaraka ireto ary ampiasao ilay iray izay heverinao fa mety indrindra. Tsy izy rehetra no afaka sy tsy tokony hanompo antsika.
2 Tsy misy fanelingelenana, Fahalalahana
3 Mifehy ny hetsika ataonao amin'ny Harvest
4 E-mail miaraka amin'i Spark
5 Tontolo iainana mamokatra kokoa miaraka amin'i Noizio
Fitaovana tiako manokana. Raha iray amin'ireo mora variana toa ahy ianao dia ampiasao. Amin'ny Momentum dia afaka mifantoka amin'ny lahasa tena ilainao ianao, tsy misy mihoatra. Apetraho ao amin'ny browser-nao ny fanitarana ary sokafy vakizoro vaovao. Soraty ny fisoratana anarana amin'ilay mpampiasa vaovao anao ary kitiho eo amin'ny bara mba hanoratanao ilay asa efa niandrasanao. Mora toy ny mamaky izany rehefa manokatra takelaka vaovao ianao dia ho tadidinao foana ilay lahasa niandry anao. Noho izany, ny tanjonao voalohany dia tsy ny hanokatra kiheba tantara, manokatra ilay anananao eo amin'ny efijery ianao.
Raha ny tena izy, ny Momentum dia mifototra amin'ny "fahazarana", ary azonao atao ny mametraka fampahatsiahivana, tanjona ary fandaharam-potoana, ary koa ny badge izay mampiseho hoe firy ireo fahazarana sisa tavela vitanao tamin'io andro io. Isaky ny mahavita fahazarana tsy misy fanelingelenana ianao dia mihalehibe ilay 'rojo', dinamika lalao fanampiny hanentanana anao.
Tsy misy fanelingelenana, Fahalalahana
Tahaka ny Momentum, ny Freedom dia manome anao vokatra bebe kokoa amin'ny fanesorana ireo fanelingelenana. Amin'ity tranga ity dia fitaovana matotra kokoa ny Freedom. Amin'ny ankapobeny, manakana ireo tranokala sy fampiharana izay manakana anao tsy hamokatra izy io.
Izy io koa dia miasa amin'ny endrika rehetra, finday (iOS na Android) ary solosaina (PC na Mac). Ka manakana anao tsy hijery 'haingana' amin'ny Instagram amin'ny findainao izany.
Mifehy ny hetsika ataonao amin'ny Harvest
Na dia misy fitaovana maromaro etsy ambony aza mifantoka amin'ny fitantanana na fanakanana zavatra fantatrao fa manelingelina, mety tsy ho fantatrao foana hoe inona izy ireo, na mety tsy ho azonao ny fotoana laninao amin'ny zavatra sasany.
Amin'izay dia mila extension extension toa an'i Harvest ianao. Tracker fotoana tsotra, manome anao tatitra marina sy tsy voafetra momba izay tena mandany ny fotoanao amin'ny Internet, hahafahanao manao zavatra momba izany.
Anisan'izany ny fomba hafa RescueTime , izay mihazakazaka any aoriana ary mamakafaka ny isan-jaton'ny fotoana laninao amin'ny tranokala sy asa sasany, ary manome 'isa famokarana' isan'andro mifototra amin'ny hetsika ataonao.
E-mail miaraka amin'i Spark
Ny mailaka no fanelingelenana lehibe indrindrasatria matetika mifandraika amin'ny asa izy ireo ka tsy mahatsiaro ho mangataka andro, fa tsy maika foana, na dia mahatsapa izany aza izy ireo amin'izany fotoana izany.
Betsaka no misoratra anarana amin'ny teôria fa ny mailaka dia tokony hohamarinina sy valiana amin'ny fotoana voafaritra tsara isan'andro fotsiny, manome anao ny ankamaroan'ny fotoananao hifantoka amin'ny tetikasa. Na izany aza, raha mila misoratra anarana ianao dia mety hanampy ny fitaovana toa an'i Spark.
Fantatr'i Spark hoe iza amin'ireo mailakao no zava-dehibe indrindra ary afindra any an-tampon'ny lisitra izy ireo. Ny fisehony Smart Inbox dia manasokajy ny zava-drehetra ao anaty Personal, Notifications ary Newsletters, ary mampitandrina anao fotsiny rehefa misy. Ny laharam-pikarohana intuitive dia mamonjy fotoana ihany koa.
Tontolo iainana mamokatra kokoa miaraka amin'i Noizio
Ny vokatry ny feo amin'ny haavon'ny fifantohana sy ny famokarana antsika dia mety lehibe tokoa. Ny feo sasany dia manelingelina tsy azo iadian-kevitra, ny hafa kosa afaka manampy antsika hifantoka. Ity no ambadiky ny tao ambadik'i Noizio, izay miantso ny tenany ho "mpiara-dia aminy tsy fantatra." Noizio dia manome feo ambadika ambadika fotsiny hanampiana amin'ny fampitomboana ny vokatrao ary hanakanana ireo feo hafa manelingelina hafa izay mampiala anao anao ankehitriny ary mampiadana ny fizotranao. Ny feo azo dia misy avy amin'ny kafe miala sasatra na ny feon'ny onja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Fitaovana famokarana ho an'ny mpamorona